गफ ! .....: गफ : ब्लगलेखनको 'लेट', ब्लगरहरुसँगको भेट
Posted by दीपक जडित at 6:32 AM
रमाइलो भएछ !
हुन त तपाई सात समुन्द्र देखि आएर भेटिसक्नु भएछ सबैलाई, तर हामी यहीँ भएकाहरु आ-आफ्नै समस्या मा अल्झिरहेका छौँ, या भनौँ भेट्ने साइत अहिले सम्म जुरेको छैन ।
हो दीपकजी ब्लगिङले जुराइदिएको आत्मिय सम्बन्धको पहिलो भेट एकदमै सहज र रमाइलो लाग्यो मलाई। अनि ब्लगरको नाता जोडेको मित्रताको चिनो पनि सँधैलाई स्मरणीय छ र हुनेछ मेरो लागि (अँ, तपाईले पुस्तकको कुरा हाल्नुभएपछि मलाई यो कुरा नहाली मनले धरै दिएन यहाँ)। त्यसमाथि यहीका केही दुरीमा बसेका हामी ब्लगरहरुबीच पनि भेट गराउने कडी बनिदिनुभयो। त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद नदिइ रहन सकिदैन।
ब्लगिङको यात्रा जारी रहोस्। शब्द संवाद कायमै रहोस्। यो गजल त निकै घत पर्यो मलाई। आफ्नै अनुहार ऐनामा हेरेर जबरजस्ती हाँसेझैँ।
तपाईको यात्रा र काम शुभ रहोस् पुन भेट्ने मौका मिलोस्। जय होस‌्।
ब्लग लेखनको साइनोमा, दोस्ती गांसेकै रा'न ,
लोड शेडिंगले मारामार भएपनि,पोष्ट टाँसेकै रा'न
जडितजीको अनुभब पढेर खूब रमाइलो लाग्यो है !
साँच्चै अचम्मै हुँदो रहेछ ब्लगको नाता । मलाई लग्छ हामी कसैलाई पनि कसैसंग पहिलो भेट भएजस्तो महशुस नै भएन ।
हामी बुढाबुढी पनि यता आएको करिब २ महिना हुनलाग्दा पनि "अफ लाइन' भेट भने कसैसंग भएको थिएन र सबैसंग भेट्ने इच्छा भएपनि सायद साइत जुरेको छैन ।
त्यसैले सकिन्छ भने एउटै थलोमा बढिभन्दा बढी साथीहरुसंग भेट गरौं भनेर यो वनभोजको कुरा उठाएको हो ...अरु साथीहरुले पनि यही नै सल्लाह गर्दा पनि हुन्छ कि कसो ?
अर्कोपटक भने अलिक फुर्सद लिएर आउनुहोला है !
गुरुवा गुरुआमा साथि संगिनी सबैलाई भेट्नु भएछ... रमाईलो लाग्यो... हाम्रो चाहिँ छेउ छाउका साथिलाई नि भेट्न कहिले टाईम जुरया होइन ....
देश भरि सबै हाँसेको कुरा त्यसमाथि दाइको सुन्दर प्रस्तुतिमा सुन्दा आनन्द लाग्यो ...
हिजो एकफेरा पढेर भेटको स्मरण ताजा पार्दै-मख्खिँदै बाहिरिएको थिएँ । आज फेरि प्रतिक्रियामा केही लेख्‍न कुतकुतिएर पसेको छु ।
ब्लगर भेटको संस्मरण कति आत्मीयतापूर्वक लिपिबद्ध गर्नुभएछ । मलाई भने यो भेट ब्लगर कम र पारिवारिक ज्यादा लाग्यो । हुन त ब्लगर भएकै आधारमा हाम्रो चिनाजाना ऊ बेलामा मौलाएको हो, तर ब्लगरको आ-आफ्नै परिवेश र अस्तित्वदेखि पर रहेर आत्मीयताले हामी त्यो दिन गोलबद्ध भएको पललाई ब्लगर भेट मात्रै भनेरै खुम्च्याउन एकरत्ति मन मान्दैन मेरो । साँच्चि त, त्यसै बेला पनि कुरा गरेको हामीले, यो पहिलो भेट जस्तो लागेन, शब्दको खेतीबाट मात्र अप्रत्यक्ष रूपमा साउती मार्दै आएका हामी पहिलो पटक मुखामुख गर्दा पनि चिनाजाना भावले कत्ति पनि विरानो अनुभूति भएन ।
निकै प्रिय लाग्यो सबै कुरा । कैलाशजीसँगको भेटमा पुल बनिदिनुभयो । धन्यवाद जडितज्यूका साथै दाइ-भाउजू ब्लगर र कैलाशजीलाई आत्मीय भेटका लागि ।
कुराकानी र भावनाको आदानप्रदान जारी रहने नै झन् पूर्ववत्, अब त झन् भेटको घनिष्‍टता पनि गाँसिएको छ । ब्लगसँगै जीवनको हरेक पाटो मिल्दै जाओस् । किताब निकाल्ने जोरजामले पनि रफ्तार लेओस् ।
आउँदा-जाँदा लाउँला पिरति ।
पुनश्‍च: यस्तो बेवास्ता गरिएको काफियामा कति सपाट नेपाली झलक आउने गरी गाउँले लवजमा गजल कोर्नुभएछ । नेपाली भूमिले जडितज्यूको कलमलाई भरपूर चिनेछ । सुगन्ध मीठो छ ।
माथि चैतन्यजीको दुई लाइन पनि रमाइलो लाग्यो ।
अहा! कति आत्मीय भए होलान, ब्लगर दोस्तीका भेटघाटका ती न्याना क्षणहरु । पोस्ट पढेर नै रमाइलो अनुभव भयो ।
भेटघाटको कुरा रमाईलो लाग्यो, डाहा पनि लाग्यो:)
गजल भावपूर्ण र सटीक छ।
तपाईँको नेपाल बसाई यस्तै सुखमय र रमाईलो रहिरहोस्। यस्तै धेरै कुराकानी र रचनाहरुको आशामा छौं हामी।
दीपकजी, तपाईंको "ब्लग लेखन्को लेट"ले मलाई त फनफनी घुम्यायो। ब्लगर मित्रहरु सङ्गको अबिस्मरणिय भेटघाटले बिदेश बसाइको यादहरुलाई चुर्लुम्मै भुल्नु भएछ। नभुल्नु पनि कसरी र?किनकी रगतको नाता भन्दा परको नाता आत्मियता नजिकहुन्छ भन्छु मत। भेटघाटमा ब्यस्त त्यहा कुनैपनि
अबरोध थिएन। रुखको आडमा रुखकै लहराझै अबिचल बषौदेखी बेरिएर एक तमाससँग बेरिएको मित्रहरुको मायासङ्गै एकाकार हुनुभयो। खुशीको कुराहुन।
दुखाईमा होस् या होस् मस्तिमा हाँसेकै रा'न् । गजलका यि लाइनहरु सँगै बिदा। नेपाल आमासङ्गको बसाइ सुखद रहोस् ।
पहिला कहिले काही सोच्ने गर्थें 'के हाम्रो साइनो ब्लगमा मात्रै सिमीत होला त?' भनेर ।
तर ब्लगको साईनो साँच्चै गाढा हुने रहेछ । तपाइहरुसंग भट्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो । खै, कुनै सानोतिनो 'कार्यक्रम' नै आयोजना गेर भएपनि सकेसम्म धेरैजना एकै थलोमा भेट्न पाए त कत्ती रमाइलो हुन्थ्यो होला !
कम्पूटरका स्क्रिनमा मात्र पढिने ब्लगरहरू बीचको भेट साह्रै आत्मिय भएछ । समय मिल्यो भने त म पनि सबैलाइ भेट्न तयार भएर बसेको छु है ।
हत्तेरी यस्तो रमाइलो पोस्ट पढनलाई म यतिका ढिला पो भएछु। दीपक जी त्यो चार चार जना ब्लगरको भेटघाट कति रमाइलो भएछ । पढ्दैमा यति मज्जा आयो की म आफै पनि सहभागी भएजस्तो। धन्यबाद भेटघाटको यो रमाइलो गफगाफको लागि ।
तपाईं र तपाईंका पाठकहरुलाई नयाँ साल २०६७ को हार्दिक शुभकामना ! सदा झैँ यो बर्ष पनि मेरो ब्लगमा तपाइंलाई स्वागत छ है!
ब्लग लेखनको लेटमा फेरी म प्रतिक्रियाहरु पढेर त्यसको रेस्पोन्स लेख्न पनि लेट नै आएको छु । प्रतिक्रिया लेख्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद! सकेसम्म र मौका परेसम्म हामीले भेटघाट, माया प्रिती लाएकै जाती। धाइबाजी, पुस्तक निकाल्ने कुरामा तपाईंको अघिल्तिर बसेर सोचेभन्दा धेरै सोच्न भ्याएको छैन तर सोच्ने छु । आकारजी र प्रवेशजी(भुपु उजेली)लाई पनि भेट्ने मनसुबा थियो । अहिले त म यतै हराएको छु । केहि दिनमा काठ्माण्डु फर्किंदा फेरी प्रयास गर्ने छु सबैलाई भेट्न । जदौ!